तिजको महिमा र पंचमी पूजा भित्रको उमा-महेस्वरको कथा - Chhuteka Kura
तिजको महिमा र पंचमी पूजा भित्रको उमा-महेस्वरको कथा
हरितालिका तीजकाे कथा
Chhuteka Kura प्रकाशित मिती : ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४
श्रावणको अन्त्यबाट हिन्दु चाडबाड र पर्वको रौनक चुलिन्छ।
चाडबाडले संस्कार, संस्कृति र समाजलाई प्रतिविम्बित गर्छ । हिजोआज संस्कार र सांस्कृतिको बहुआयामिक ढंगले लेखाजोखा गर्ने परम्परा पनि सतहमा आएको छ । हाम्रा परम्परा माथि प्रश्न उठिरहेका छन । जे भएपनि सामाजिक परम्पराहरु र समाजलाई एकार्काबाट छुट्याउन सकिदैन ।
समायानुकुल अभ्यास भने गर्न सकिन्छ ।
हिजोआज तीजको लहरले छपक्कै छोपेसंगै महिला दिदीबैनीहरुलाई आफ्नाे झुण्डमा एकत्रित भएर तीज मनाउन मन लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर आज विस्व कोरोना महामारीको चपेटामा छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा वाह्य व्यक्तिहरुको सामिप्यता बर्जित छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै, नेपाली नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीज “पंचमी” पूजा आफ्नै सक्रियतामा कसरी गर्न सकिन्छ ? जस्ता कुराहरु छुटेको हामीले महसुस गरेर यो सामाग्री तयार गरेको छौ ।
तिजलाई किन “हरितालिका” भनीएको हो ? हरितालिका तीज किन र कसरी मनाउने ? पर्वका रुपमा तिज कहिलेबाट मनाउदै आईएको हो ?
तीज पर्वमा गरिने पूजाका फाइदाहरु के-के छन ? हरितालिका तीजको सम्पूर्ण पूजा विधी लगायत बारे यस भिडियोबाट सुचित हुनुहोस।
त्यसैगरी, प्रस्तुत भिडियोमा बोलिएको कुराहरुलाई लिखित रुपमा समेत तल प्रस्तुत गरिएको छ।
हरितालिका तीजको महिमा पूजा विधी सहितको भिडियो हेर्नुहोस
कुमारी कन्याहरुले आफूले सोचेजस्तो बर प्राप्ती होस भनेर उमा-महश्वरको पूजा गरी हरितालिका तीजको ब्रत बस्दै यो प्रक्रिया पुरा गर्दछन। विवाहित महिलाहरुले आफ्नो पतिदेवको दीर्घ आयू र उतरोत्तर प्रगतिको निम्ति हरितालिका तीजको व्रत बस्ने चलन छ।
यो व्रत निराहा बस्ने चलन छ। हिन्दु नारीहरु दिब्य-दिब्यादी बस्त्र,आभूषण,रत्न,अलंकार सुन,चादी धारण गरि गाउँ ठाउँका चोकमा,आफ्नो साथि संगीको समुहमा भेला भई नृत्य मनोरञ्जन गरि हरितालिका तिजलाई उत्सबका रुपमा मनाउछन् । पुर्बिय दर्शनको विविन्न काल खण्डका प्रसङ्गहरुले हरितालिका तिजको महिमा तार्किकता र सान्दर्भिकता बोकेको छ। आज हामी त्यस्तै एक प्रसङ्गबाट हरितालिका तीजलाई स्पष्ट रुपमा बुझ्ने छौ। यहाँ बिष्णु, शिव र पार्वती अर्थात ‘उमा’ महत्वपूर्ण पात्रका रुपमा प्रस्तुत छन्।
आउनुहोस कथा सुरु गरौ-
कुरा सत्य युग को हो।
उमाको विवाह विष्णुसँग हुने कुरा चलेछ। तर यता उमा भने भोले बाबा बाहेक अरु कोहि पनि पुरुष प्रति आकर्षित थीइनन्।
महेश्वर प्रति उनको यति आघाद प्रेम थियो कि, उनि जहिल्यै ब्रम्ह मुहुर्तमा उठी स्नान गरि भोले बाबाको उपसाना, पूजा आरधाना गरेर मात्र फलाहार प्रसाद तथा जलपान गर्दथिइन। सदा झैँ कुनै एक दिन उनि भोले बाबालाई प्राप्त गर्नको लागि आफ्नै घरको सयन कक्षमा बसेर तपस्या गरिरहेकी थिईन।
यो कलिलो बैंसमै यसरि न्यास ध्यान जाप गरेको उमाका साथी संगीहरुलाई भने पटककै मन परेको थिएन। फलस्वरूप उनीहरुले उमालाई दु:ख दिनका लागि केहि कु-चेस्टाहरु प्रति सहमति गरे।
सो योजना मुताबिक उमाका साथीहरुले उमालाई हरण गरेर अत्यन्तै ठूलो घनघोर जंगलमा लगे र उमालाई छोडी दिए।
यसरि आफ्नो सखीहरुले उमालाई हरण गरेर लगेको हुनाले आजको दिन हरितालिका तीज भएको हो। जसको शाब्दिक व्याकरण यस्तो छ हरत + आलिका = हरितालिका
अब हरत भनेको हरण गर्नु र आलिका को अर्थ हुन जान्छ साथीहरु। तसर्थ, साथीहरुले हरण गरेको अर्थ बोक्ने गरि हरितालिका हुन गएको हो।
उमालाई उक्त जंगलमा एक्लै छोडेर सखीहरुले गरेको कु-कृत्य, उनलाई भने बरदान साबित भयो। उमालाई त शान्त संग तपस्या गर्ने स्थान मिल्यो। त्यो दिन घनघोर जंगलमा अत्यन्तै कठोर तपस्या गरेपछि भोले बाबाले उमालाई दर्शन दिनुभयो। अनि उमाले पनि महेस सामु आफ्नो मनको गाँठो फुकाउने उत्तम समय स्थान र मौका प्राप्त गरिन। यहि क्षणले उमा र महेसलाई एकाकार गरायो।
यसैलाई आधार मानेर आज पनि हाम्रो हिन्दु समाजमा हरितालिका तीजको ब्रत बस्ने चलन छ। कुमारी कन्याहरु बर प्राप्तिका लागि र विवाहित महिलाहरु आफ्नो पतिको दीर्घ आयूको लागि पूजा गर्दछन् । हरितालिका तीज को पूजा, उपसना र ब्रत प्रक्रिया छुट्टै र बिसिस्टिकृत छ।
समग्र पुजा विधिलाई यसरि बुझन सकिन्छ, हरितालिका तीजको दिन ब्रम्ह मुहुर्तमा उठेर स्नान गरि पवित्र बस्त्र धारण गर्नुपर्छ। प्रात सूर्य उदय हुनुभन्दा ४५ मिनेट अगाडीको समयलाई प्रदोस भनिन्छ। यो प्रदोस भन्दा पनि १५ मिनेट अगाडी नै स्नान गरि शुद्ध वस्त्र धारण गरेर पुजा कर्मका लागि तयार हुनु पर्दछ।
अब, प्रदोसको समयमा “ॐ नमः शिवाय” जाप गर्नुपर्छ। जसै प्रदोसको समय समाप्त हुन्छ तब सुर्य आगमन हुने हुदा यस समयमा भने सुर्य नारायणको ध्यान गर्नु पर्दछ ।
जसका लागि ध्यान मन्त्र हो “ॐ एहि सूर्यसहस्त्रांश तेजो राशी जगत पते अनुकम्पयमां भक्त्या गृहणध्र्यं दिवाकर” हे सूर्य नारायण भगवान जसरी तपाईको आगमनले अन्दकार हराएर चराचर जगतमा उज्यालो आउछ, त्यसैगरि मेरो अज्ञानरुपी अन्दकार हटाएर ज्ञानरुपी प्रकास दिनुहओस, भनि प्रार्थना गर्ने।
प्रार्थना पश्चात सूर्य नारायण भगवानलाई रातो पूष्प र जल चढाउने । त्यहाँ भन्दा पछि, कर्मपात्र बनाउने– कर्मपात्र तयार गर्दा एउटा तामाको थालिमा कुशका टुक्रा जल, तिल, जौं, चन्दन, अक्षता अनि पूष्प लगाउने र सम्पूर्ण आफ्नो घर र पुजा स्थानमा
“ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ll”
भन्दै पवित्र गर्ने अनि पूजा सामाग्री तयार गर्ने अब दियो, कलश, गणेश स्थापना गरि पूजा गर्ने र शुद्ध ठाउँको माटो ल्याएर शिव लिंगको आकृति बनाउने, एउटा उमाको तस्विर या मुर्ति शिव लिंगको समिपमा राखी अत्यन्त भावपूर्ण ढंगबाट आफ्नो तन, मन, वचनले उमामहेश्वरको षोडसो पचारले पूजा गर्ने जसै पुजा कर्म समाप्त हुन्छ, अनि आरति गर्ने। उमा-महश्वरलाई चढाएको, फल, प्रशाद, वस्त्र इत्यादि सात्विक ब्राम्हण गुरु र गुरु पत्नीलाई आफ्नो घरमा बोलाएर दिने। र ‘ॐ नमं: शिवाय” को जाप गरि बस्ने।
यसरी उमा-महेस्वर्को पुजा कर्म समापन गरिन्छ।
आउनुहोस अब यसको फल र अन्य पक्ष बारे पनि चर्चा परीचर्चा गरौ। विधिवत रुपमा उमा-महेश्वरको पूजा गर्नाले विवाह भएको छैन भने पनि आफुले सोचेजस्तो वर प्राप्ती हुने हुन्छ। गृहस्त जीवनमा समस्याहरु छन भने पनि समधान हुदैजाने हुन्छ।
यसैगरि हरितालिका तिजको पूजा अत्यन्तै भक्ति भाबका साथ तन, मन, वचनले गरेमा पूत्र प्राप्ती नभएको, पति–पत्नी बिचमा झगडाको मिलाप नभएको जस्ता समस्याबाट छुटकारा मिल्ने सम्मको कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ।पूत्र प्राप्ति नभएको र श्रीमान श्रीमती बिचमा सदैव विवाद वा झगडा हुने र कहिले पनि मेल मिलाप नहुने समस्या छन भने, के गर्ने ?
आउनुहोस्, तेस्को विशेस पुजा विधि एस्तो रहेको छ। जस्तो, अघी माटोको शिव लिंगको समिपमा हामीले उमाको मुर्ती पूजा गरेको थियौ नि,त्यो दुईवटा मुर्तिको विचमा रातो कपडा राख्ने र त्यो कपडा माथी एउटा जनाई, सुपारी, २१ वटा दुवो र तीनवटा कुशको टुक्रा र १० रुपैयाको एउटा नोट,एक रुपैयाँको एउटा सीक्का यानिकी ११ रुपैया बनाएर राख्ने, अब अत्यन्त भावपूर्ण तरिकाले चन्दन, अक्षता, पुष्प उमामहेश्वरको प्रतिमामा चढाएर प्रसाद स्वरुप हजुरले त्यसलाई आफ्नो हातमा लिएर तिन गाठो पारि आफ्नो पतिदेवको सुत्ने सिरानेको मुनी राख्नु पर्दछ।
यसो गरेमा पुत्र प्राप्ति हुन्छ। पति पत्नीको बिच मिलन हुन्छ। अनि गृहस्थ जीवन सदैव सुख, शान्ति,समृद्धिको साथ आगाडी बढ्छ।
आज हरितालिका तीज यसलाई अत्यन्त शोभायमान र उत्सवका रुपमा मनाऔ, तपाईहरु सबैमा हरितालिका तीजको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
ॐ सान्ति: शान्ति: शान्ति:
राष्ट्रकविसँगको मेरो सपना
मुस्कुराउँदैं रानी पाेखरी ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४
अभिभाबक विहिन बनेका बालबालिकालाई सहयाेग – बिशाल ग्रुपद्वारा स्वदेशी लघुवित्त मार्फत ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४
चाैबिसै घण्टा खट्नसक्ने नयाँ प्रहरी सहरमा – भिडियाे हेर्नुस ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४
काठमाडाैं उपत्यकामा यस्ता मान्छेहरू पनि भेटिए – भिडियाे हेर्नुस ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४
पाटनमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडपको पुरा भिडियो हेर्नुहोस् ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५४